नेकपामा झगडाको बीउ कसरी रोपियो ? » छलफल
अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अन्तर्कलह पेचिलो बन्दै गएको छ, मूल नेतृत्व र वरिष्ठ नेताहरूका बीचमा असमझदारी बढेको छ, पार्टी र सरकारकाबीच असमझदारी बढेको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा सामूहिक छलफल नगरी एकलौटी गर्नुभएको, पार्टी नीति, विधि र पद्धतिमा नचलाउनुभएको, राजनीतिक नियुक्तिदेखि अन्य अवसरका सबै क्षेत्रका आफ्नो मनलाग्दी गर्नुभएको, नेताहरूको योगदानलाई आत्सात गर्न नसक्नुभएको, प्रमुख नेताहरूको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउनुभएको, सामूहिक योगदानमा आधारित भएर चल्नुभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित
भएर चल्नुभएको उहाँइतर पार्टीका नेताहरूले भनिरहनुभएको छ भने उहाँले पार्टीका नेताले आफूलाई सरकार सञ्चालनमा असहयोग गरेको, विरोधीको भूमिका निर्वाह गरेको, बैठकमा अनावश्यक एजेण्डा ल्याएर घेराबन्दीमा पारेको, एकताविरोधी र पहिलेको सहमतिविपरीत काम गरेको भन्नुभएको छ । जसले गर्दा मूल नेतृत्वका बीचमा मनमुटाव उत्पन्न भएको छ भने स्थायी समितिको बैठकसमेत सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । त्यतिमात्र होइन, यो असमझदारीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत बोलाउन माग भइसकेको छ ।
यो गम्भीर संकटको अवस्था हो । यसले न पार्टी बलियो भएको छ, न नेताहरूलाई शोभा दिएको छ, न नेता कार्यकर्ताहरूलाई चैन दिएको छ । यसले केवल वैरी हँसाउने र खुसी पार्ने काम मात्र भएको छ । यतिबेला नेकपाको एकता प्रक्रिया सम्पन्न भएर महाधिवेशनको राप र ताप आउन थाल्नु पर्ने हो । नेकपाको सरकारले जनताका इच्छा आकांक्षा भने जसरी पूरा ग¥यो भनेर जनताले स्यावासी दिनुपर्ने बेला हो, महामारी छिचोल्नेदेखि राष्ट्रियताका मुद्दामा सफलता हासिल गर्ने बेला हो, कोरोनाले उथलपुथल पारेको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने बेला हो, पार्टीलाई सरकारले र सरकारलाई पार्टीले सहयोग गरेर राष्ट्रिय समृद्धि भित्र्याउनु पर्ने बेला हो । के अहिले त्यसै भइरहेको छ त ? त्यसो किन हुन सकिरहेको छैन ? त्यतातिर दल र सरकारको ध्यान जान किन सकिरहेको छैन ? जनता चिढ्याउने र वैरी हसाँउने काम किन भइरहेको छ ? दुवैतिर गुटका भेला र बैठक किन भइरहेका छन् ? नीति, विचारको बहस गर्न छोडेर व्यक्ति केन्द्रित बहसले नेकपाको साखमात्र गिरेको छैन, नेतृत्वको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यो गुटगत प्रवृत्ति र व्यक्ति केन्द्रित व्यवहारले नेकपालाई कमजोर बनाउँछ भने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई दास बनाउने छ अनि सुशासन र समृद्धि आकाशको फल हुनेछ, यसतर्फ नेतृत्वको तत्काल ध्यान जानुपर्छ ।
पार्टीमा यस्तो रडाको चलिरहेको बेलामा यसको अन्यका लागि भनेर उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सहमतिका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको छ । यसले पार्टीको विवाद हल होला वा समीकरण फेरबदलको राप झन् चर्केला यो समयले बताउँला नै तर अहिलेलाई नेताहरू आत्मकेन्द्रित नभई देश, जनता र पार्टीका लागि लाग्नुपर्दछ, सोच्नुपर्दछ र विवाद समाधानतर्फ लाग्नुपर्दछ । त्यसले मात्रै पार्टी एकता मजबुत हुने छ । यसर्थ मूल नेतृत्वले अरूले दिने राय, सुझावभन्दा आफ्नै अनुभव र अभ्यासलाई आधार बनाएर पार्टीलाई नीति, विधि र पद्धतिमा लैजान सक्नुपर्छ । यसका लागि मूल नेतृत्व मिल्नुको विकल्प छैन ।